Harmonic သည် VOS (TM) Cloud နှင့် VOS 360 Solutions များကိုစျေးကွက် ဦး ဆောင်နိုင်သည့်ကစားနိုင်စွမ်းကိုပေးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » သဟဇာတ VOS (TM) တိမ်တိုက်နှင့် VOS 360 Solutions မှ Market က-ဦးဆောင်ပလေးအောက်ကိုစှမျးဆောင်ကြဉ်း
သဟဇာတ VOS (TM) တိမ်တိုက်နှင့် VOS 360 Solutions မှ Market က-ဦးဆောင်ပလေးအောက်ကိုစှမျးဆောင်ကြဉ်း
San Jose, ကာလီဖိုးနီးယား - ။ ဧပြီလ 22, 2017 - သဟဇာတ (NASDAQ: HLIT), ဗီဒီယိုဖြန့်ဝေအခြေခံအဆောက်အအုံအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ပါက၎င်း၏စျေးကွက်-ဦးဆောင် Spectrum (TM) မီဒီယာ server ကိုမှအအစွမ်းထက်ထုတ်လွှင့်ပလေးအောက်ကိုစွမ်းရည်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည် သဟဇာတ'' s ကို VOS (TM) ဝန်ဆောင်မှု (SaaS) ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် Cloud ကိုမီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့ပလက်ဖောင်းနှင့် VOS 360 မိုဃ်းတိမ်ကိုမီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ။ နှစ်ဦးစလုံး VOS ဟာယပူဇော်သက္ကာအတွက်အသစ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖိုင်ကို-based နှင့်တိုက်ရိုက် Workflows နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ဂရပ်ဖစ်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ (DVE) အတွက်ထောက်ခံမှုပါဝင်သည်။ မိုဃ်းတိမ်မီဒီယာအပြောင်းအလဲနဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုဦးဆောင်, သဟဇာတ ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေး, ပိုမိုမြန်ဆန်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် OTT ဟာယပူဇော်သက္ကာကိုဖွင်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်စွာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် OPEX နှင့် CAPEX လျှော့ချရန်ခွင့်ပြု, ဆော့ဖ်ဝဲ-based နဲ့ cloud Workflows ဖို့အကူးအပြောင်းကိုမောင်းကူညီပေးနေသည်။
"ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးထိုကဲ့သို့သောအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုနှင့်သွက်လက်ကဲ့သို့သောအခြားအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အတူကြောင့်ထိုသို့ပြုပေးသည်သောတိုးမြှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာထိရောက်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏ဗီဒီယိုကိုပြင်ဆင်မှုများနှင့်ဖြန့်ဝေဘို့မိုဃ်းတိမ်မှလှည့်နေကြတယ်" ဟု Bart Spriester, အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ, ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်ကပြောပါတယ် တွင် သဟဇာတ။ "ဟုအဆိုပါ VOS Cloud နှင့် VOS 360 ဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Spectrum မီဒီယာဆာဗာများမှာတွေ့ရတဲ့ပလေးအောက်ကိုစွမ်းရည်ရှိမယ်၎င်းတို့၏စစ်ဆင်ရေးအရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအမှတ်တံဆိပ်အားဖြည့်, Pop-up လိုင်းများ, လျင်မြန်ပလက်ဖောင်းအဖြစ်ငွေရှာခြင်းအတွက်များစွာအပိုဆောင်းအမျိုးအစားများ, ဖွင့်, အော်ပရေတာများအတွက်အပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်ငွေစုထဖွင့်လှစ် ဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့, ဂရပ်ဖစ်ရရှိနိုင်ပါနှင့်ပိုပြီး။ စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဆုံး cloud-ဇာတိဖြေရှင်းချက်နှစ်ခုသည်အတိုင်း, VOS ဟာယပူဇော်သက္ကာအော်ပရေတာကိုဗီဒီယိုဖန်တီးကယ်နှုတ်တော်မူသောလမ်းကိုအပေါ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလုပ်နေပါတယ်။ "
အဆိုပါ VOS တိမ်တိုက်ဖြေရှင်းချက်အများပြည်သူသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကမိုဃ်းတိမ်သည်အခြေခံအဆောက်အဦများအပေါ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် OTT များအတွက်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ဖြန့်ဝေလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အကြောင်းအရာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါတယ်။ မိုဃ်းတိမ်၌ပလေးအောက်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူအော်ပရေတာရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ပလေးအောက်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်နောက်ထပ်လုပ်ငန်းအသွားအလာရိုးရှင်းလွယ်ကူတာကိုမောင်းနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ VOS တိမ်တိုက်ဖြေရှင်းချက်ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အစပျိုးခြင်းနဲ့တူအလယ်တန်းဖြစ်ရပ်များဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာ OTT နှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်သင့်လျော်သောပုံစံများဖြင့်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ကြောင်းသေချာ, ဖိုင်များ retrieve မှပြင်ပသိုလှောင်မှုကိုရယူသုံးခြင်းနှင့်လိုအပ်သကဲ့သို့, ထိုသူတို့ကိုပုံမှန်ကနေရုပ်သံလိုင်းဖြစ်ပေါ်အလုပ်များကိုကျယ်ပြန့်ကိုင်တွယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အော်ပရေတာကြိုးကိုင် VOD ကိုထောကျပံ့နိုငျပွီးအသကျရှငျ-to-VOD ပလေးအောက်အဖြစ်ဖိုင်-based ပိုင်ဆိုင်မှု်ဝယ်ယူ။
ဤရွေ့ကားပလေးအောက်ကိုစွမ်းရည် (အ VOS 360 SaaS ဘို့လည်းရရှိနိုင်ပါသည်www.vos.tv), သောအများပြည်သူမိုဃ်းတိမ်၌တည်ခင်းဧည်နှင့်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်အားဖြင့်စောင့်ကြည့်နေသည် သဟဇာတ။ ထူးခြားတဲ့ VOS 360 ဝန်ဆောင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်, သဟဇာတ ပတ်ပတ်လည်-The-နာရီ DevOps လွှမ်းခြုံပေးတဲ့ professional ဆက်ကပ်အပ်နှံ 24 /7စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ဆောင်မှုအဆုံးဖောက်သည်များအတွက်အတှေ့အကွုံ (QoE) ၏ပိုကောင်းအရည်အသွေးရရှိလာတဲ့, လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုအချိန်နှင့်အတူစစ်ဆင်ရေးန်ဆောင်မှုကိုစောင့်ရှောက်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။
သဟဇာတ'' s ကိုပွင့်လင်းဗိသုကာမဟာဗျူဟာဂေဟစနစ်မိတ်ဖက်တွေနဲ့ချောမွေ့စွာပေါင်းစည်းမှုစစ်မှန်တဲ့အဆုံးမှအဆုံးသို့ OTT ကဗီဒီယို, မိုဃ်းတိမ်န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းသေချာစေရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ VOS ဖြေရှင်းနည်းများကိုအောင်မြင်စွာ Mirantis နှင့် တွဲဖက်. တစ်ခု OpenStack ပုဂ္ဂလိကမိုဃ်းတိမ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဦးဆောင်မြောက်အမေရိကဝန်ဆောင်မှုပေးနေဖြင့် OTT န်ဆောင်မှုများအသက်ရှင်နေထိုင်အပါအဝင်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အသုံးပြုမှုမော်ဒယ်များ၏ကျယ်ပြန့အတွက်အသုံးချခဲ့ကြနှင့်လက်ရှိမြောက်မြားစွာ On-လေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုများတွင်အသုံးပြုလျက်ရှိသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစမ်းသပ်မှုတွေ။
သဟဇာတ VOS Cloud နှင့် VOS 360 ဟာယပူဇော်သက္ကာအပေါ်မိုဃ်းတိမ်ကိုပလေးအောက်အပါအဝင် - - အသံလွှင့်ခြင်းနှင့် OTT ဗီဒီယိုကိုဖြန့်ဝေဘို့က၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်တီထွင်မှုတခုအဖြစ်မည် 2017 မှာ NAB ပြရန်, တဲ SU1210 ။ အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ သဟဇာတ နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင် www.harmonicinc.com.
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.202comms.com/သဟဇာတ/သဟဇာတ-VOS-360-VOS-CLOUD.jpg
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: သဟဇာတ VOS (TM) တိမ်တိုက်မီဒီယာထုတ်ယူခြင်းပလက်ဖောင်းနှင့် သဟဇာတ VOS 360 Professional ကတိမ်တိုက်မီဒီယာထုတ်ယူခြင်း SaaS ဖြေရှင်းချက်
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း CAPEX သဟဇာတ ခေါင်းဆောင် ဈေးကွက် OPEX ပလေးအောက် Software များ ဖြေရှင်းချက် ဗီဒီယိုကိုအကြောင်းအရာ VOS 360 VOS တိမ်တိုက် 2017-04-26
ယခင်: PCCW Global immersive 360-ဘွဲ့, သဟဇာတအတူ VR အားကစားအတွေ့အကြုံဘဝမှကယျတငျ
နောက်တစ်ခု: Shure NAB 2017 မှာAxient®ဒစ်ဂျစ်တယ်ကြိုးမဲ့စနစ်မိတ်ဆက်